Guddoomiyihii Hore Ee Gollaha Wakiilada Somaliland Mr. Qaybe Oo Si Taxadir Leh Uga Hadlay Xaalada Deegaanka Buuhoodle Ee Dagaalku Ka Dhacay | Araweelo News Network (Archive) -
Hargeysa(ANN) Siyaasiga ruug-caddaaga ah, isla markaana ahaa Guddoomiyihii Golaha Wakiiladda Somaliland ee hore Axmed Maxamed Aadan (Qaybe), ayaa si taxarid leh uga hadlay xaalada deegaanka Buuhoodle ee dagaalku ka dhacay shalay, wuxuu ku baaqay
in degdeg loo joojiyo dagaalka khasaaraha culusi ka dhashay ee dhimashada iyo dhaawaca keenay, kaas oo shalay dhexmaray ciidanka Qaranka Somaliland iyo maleyshiyada SSC ee ay taageerto kooxda Puntland.
Md. Qaybe waxa uu sheegay in aan loo baahayn dagaalkaa, maadaama Madaxweyne Axmed Siilaanyo go’aan ka soo saaray degaanka Kalshaale ee la isku haysto.
Oday Axmed Maxamed Aadan Qaybe oo hada degen gurigiisa magaalada Hargeysa waxa uu sidaa ku sheegay Qoraal kooban oo uu saxaafada ugu tala galay, kaas oo u qornaa sidan;-
“Waxaan ka xumahay dagaalka saaka [shalay] 7/2/2011 ka qarxay deegaanka kalshaale oo sida la soo sheegay labada dhinac dhimasho iyo dhawac gaadheen. Dagaalkaas looma baahna maadaama arrimaha la isku hayo Maxdaxwayne Axmed Maxamed Maxamud go’aano ka soo saaray dhamyistirkodana gacanta ku hayo. Waxaan soo jeedinayaa in degdeg loo joojiyo xabadda oo nabad lagu soo dabaalo deegaamadaas.” Ayuu kusoo koobay qoraalkiisa Mr. Qaybe.